FC Port oo caawa 3-1 ku durdurisay kooxda Bayern Munich, lugta hore ee Wareega 8-da ee Champion League | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha FC Port oo caawa 3-1 ku durdurisay kooxda Bayern Munich, lugta hore...
FC Port oo caawa 3-1 ku durdurisay kooxda Bayern Munich, lugta hore ee Wareega 8-da ee Champion League
Kooxdqa FC Porto ayaa garoonkeeda cashar lama ilaawaan ah ugu soo dhigtay Bayern Munich oo marti ugu hayd. Porto ayaa kooxda dhaawacyadu dishoodeen ee Bayern guushan kaga gaadhay 3:1 waxaana guulasha u kala dhaliyay Quaresma oo laba gool dhaliyay iyo Jackson Martínez oo goolka kale dhaliyay, waxaan Baryern goolka kaliya udhaliyay Thiago Alcántara.Porto ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed layaableh, waxayna fursad fiican u haysataa inay u soo gudubto wareega afar dhamadka Champions Leaque-ga.
Bayern Munich ayaa marti u ahayd kooxda ree Portugal ee FC Porto laakiin Bayern ayaa kulankan iskeentay iyada oo ku jirta xaalad aad u xun.Ciyaartoy badan oo muhiim ah ayaa kooxda Guardiola dhaawac kaga maqan halka qaar soo laabtayna ayna wali taam ahayn.
Bayern Munich ayay kulankan dhaawac kaga maqanayeen ciyaartoyda kala ah Javi Martinez,Mehdi Benatia,David Alaba,Bastian Schweinsteiger,Franck Ribery iyo Arjen Robben halka xidiga kale ee Jerome Boateng,Lahm iyo Thiago Alcantara ay ku bilawdeen shaxda Bayern kadib markii ay taam u noqdeen.
Kooxda martida loo ahaa ee Porto oo xili ciyaareedkan qaab ciyaareed fiican ku jirta ayaa markiiba ciyaarta ku bilaabatay qaab ciyaareed fiican, waxayna isla markiiba halis ku abuurtay Bayern Munich.Daqiiqadii 2aad ee ciyaartaba waxaa fursadii ugu horaysay heshay Porto kadib markii uu Martinez kula soo baxay goolka Bayern laakiin goolhaye Manuel Neuer ayaa qalad ku galay taas oo keentay in rekoodhe lagu dhigo Bayern Munich.
Waxaaa kubbada qaatay oo rekoodhahaas gool u sarifay Quaresma kaas oo ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Porto xili horeba hogaanka ciyaarta kula wareegtay. Porto ayaana umuuqatay inay ka go’antahay inay xili horeba ciyaarta ay goolal ka dhaliso.
Porto ayaa qaab ciyaareedkeeda fiican sii wadatay waxayna markiiba haddana la timid goolka labaad, waxaana goolka labaad daqiiqadii 10 aad ayuu markale Quaresma kooxdiisa Porto udhaliyay goolka labaad, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Porto hogaanka ku dheeraysatay muddo toban daqiiqo gudaheed ah. Dante ayaa sameeyay qalad wayn kadib markii uu si caajis ah kubbad iska bixiyay waxaana kubbada si sahan uga qaatay Quaresma kaas oo goolka labaad sidaa ku dhaliyay.
Bayern Munich ayaa dadaal badan u gashay sidii ay iskaga soo celin lahayd goolasha lagaga naxsaday ee xili horeba laga dhaliyay, waxayna goolkeeda kowaad la timid daqiiqadii 28 aad waxaana goolkaas udhaliyay Thiago Alcántara kaas oo ka faa’iidaystay kubbad fiican oo uu ka helay Jerome Boateng ciyaarta ayaana noqotay 2:1 ay wali Porto hogaanka ku haysay. qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:1 ay Porto hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii hore ee ciyaarta ayay Porto halkeeda ka siiwaday qaab ciyaareedkeeda fiican waxayna markale goolkeeda saddexaad la timid daqiiqadii 65 aad waxaana markan shabaqa soo taabtay Jackson Martínez kaas oo ka faa’iidaystay Alex Sandro waxayna markan ciyaartu noqotay 3:1 ay Porto markale hogaanka ku dheeraysatay.
Inkasta oo ay Bayern Munich dadaal badan u gashay sidii ay iskaga soo celin lahayd goolasha looga hormaray ayay haddana awoodi wayday inay wax goolkale ah la timaado. Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:1 ay Porto ku dubatay kooxda martida u ahayd ee Bayern Munich. Kooxda Guardiola ayay soo gaadhay guuldaro xanuunan badan waxaana kulanka Allinz Arena sugaysa hawl badan.